कोटिंग फॉर्म्युलेसनमा अल्ट्रासाउन्ड - Hielscher अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
विभिन्न भागहरु, जस्तै कि pigments, fillers, रासायनिक additives, crosslinkers र rheology संशोधनों कोटिंग र पेंट फार्मुलेशन मा जाओ। अल्ट्रासाउन्ड फैलावट र उत्तेजित, डिगलगोमेसन र कोटिंग्स मा यस्तो घटक को मिलिंग को लागि प्रभावी प्रभाव हो।
कोल्ट को गठनमा अल्ट्रासाउन्ड प्रयोग गरिन्छ:
उत्तेजना को जलीय प्रणालिहरु मा
dispersing र ठीक मिलिंग Pigments
आकारको कमी nanomaterials उच्च प्रदर्शन कोटिंग्स मा
कोटिंग्स दुई विस्तृत श्रेणीहरु मा गिरावट: पानी पैदा भयो र विलायक आधारित रेजिन र कोटिंग्स। प्रत्येक प्रकारका यसको चुनौतीहरू छन्। को लागी दिशा निर्देशनहरू VOC कमी र उच्च विलायक मूल्यहरूले जल-जन्मेको राल कोटिंग टेक्नोलोजीहरूमा विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ। अल्ट्रासोनिक्स को उपयोग यस्तो प्रदर्शन को बढा सकते हो पारिस्थितिकी अनुकूल प्रणाली।
वर्धित कोटिंग सूत्र
अल्ट्रासाउन्ड को कोटिंग विशेषताहरु लाई बढाने को लागि वास्तुकला, औद्योगिक, मोटर वाहन र काठ कोटिंग्स को सूत्रहरु लाई मदद गर्न सक्छ, जस्तै रंग को बल, खरोंच, दरार र यूवी प्रतिरोध या विद्युत चालकता। यी केही कोटिंग विशेषताहरू द्वारा प्राप्त गरिन्छ नानो आकारको सामग्री समावेश, जस्तै धातु ओक्साइड (TiO2, सिलिका, सीरिया, ZnO, …)।
अल्ट्रासाउन्डले थप मद्दत गर्दछ Defoaming (बुलबुले घुमाईएको) र Degassing (विलम्बित ग्यास) को अत्यधिक चिपचिपा उत्पादनहरु।
अल्ट्रासोनिक वितरण प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ल्याब, बेंच-टप र उत्पादन स्तर, throughput को 10 देखि अधिक टन / घण्टा को दर को लागी अनुमति को आर मा लागू गरिएको छ&डी चरण र व्यावसायिक उत्पादनमा। प्रक्रिया परिणाम सजिलैसँग स्केल गर्न सकिन्छ (रैखिक)।
Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु धेरै छन् ऊर्जा कुशल। यन्त्रहरू लगभग रूपान्तरण गर्नुहोस्। 80 देखि90% बिजुली इनपुट शक्ति तरल मा यांत्रिक गतिविधि मा। यो पर्याप्त मात्रामा प्रसोधन लागतको लागी जान्छ।
तल, तपाईं अल्ट्रासाउन्डको प्रयोगको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ जलीय प्रणालीहरुमा बहुलक को पायसीकरण, the फैलाउने र सुँगुरको ठीक मिलिंग, र nanomaterials को आकार मा कमी।
परम्परागत कोटिंग फारमले आधारभूत बहुलक रसायन प्रयोग गर्दछ। The पानी आधारित कोटिंग प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुहोस् कच्चा माल चयन, गुण र संरचना विधिमा असर छ।
पारंपरिक पाईलो बहुलककरणमा, उदाहरणका लागि waterborne कोटिंग्सको लागि, कणहरू केन्द्रबाट तिनीहरूको सतहमा निर्माण गरिन्छ। काइनेटिक कारकहरूले कणको संयोजक र मनोविज्ञानलाई असर गर्छन्।
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंगले दुई तरिकामा पोलिमर इमर्युसन उत्पन्न गर्न सकिन्छ।
माथि देखि तल: पाईन्छ/विच्छेदन ठूलो कणर कणहरु को सानो कणहरु लाई आकार को कमी द्वारा उत्पन्न गर्न को लागी
तल माथि: अल्ट्रासाउन्ड भन्दा अघि वा समयमा प्रयोग गर्नुहोस् कण polymerization
Miniemulsions मा नैनोपार्टिकलेट पॉलिमर
Miniemulsions मा कण को ​​बहुलककरण को साथ dispersed बहुलक कणहरुको निर्माण को लागि अनुमति दिन्छ कण आकार मा राम्रो नियंत्रण। निएपार्टिक्युलेट बहुलक कणहरूको संश्लेषण मिनीमल्सेन्समा (“नानोरिएक्टरहरू”) द्वारा प्रस्तुत गरिएको K. Landfester बहुलक नैनोकणों को गठन को लागि विधि हो। यो दृष्टिकोण nanoreactors को रूप मा एक पायसी मा उच्च nanocompartments (फैल चरण) को उपयोग गर्दछ। यिनीहरुमा, कणहरुमा एक समान समानांतर फैशन मा संश्लेषित गरिन्छ व्यक्तिगत, सीमित बूंदोहरू। उनको कागजमा (Miniemulsions मा नैनोपार्टिक्स मा उत्पन्न) लैंडफेस्टर लगभग समान वर्जन को अत्यधिक समान कणहरु को उत्पादन को लागि उच्च पूर्णता मा nanoreactors मा polymerization प्रस्तुत गर्दछ। The माथि चित्र मिनिमेन्डन्समा पलिडडिप्शन द्वारा प्राप्त कणहरू देखाउँछ।
साना बूँदाहरूको अनुप्रयोग द्वारा उत्पन्न उच्च कतरनी (अल्ट्रासोनिक्स) र एजेन्सीहरू (इमुलेशियरिङहरू) लाई स्थिर गरेर स्थिर हुन्छन्, पछिल्लो पोलिमरराइजेसन वा कम-तापमान-पिघलने सामग्रीको अवस्थामा तापमान कमी द्वारा कठोर हुन सक्छ। को रूप मा अल्ट्रासोनिकेशन को धेरै सानो बूंदों को उत्पादन गर्न सक्छन् लगभग वर्दी आकार ब्याच र उत्पादन प्रक्रियामा, यसलाई अन्तिम कण आकारमा राम्रो नियन्त्रणको लागि अनुमति दिन्छ। नैनोपार्टिजनहरूको बहुलककरणको लागि, हाइड्रोफिलिक मोनोमरहरू एक कार्बनिक चरणमा पाईन्छ र पानीमा हाइड्रोफोबिक मोनोमेर्सहरू हुन सक्छन्।
कण आकार को कम गर्दा, कुल कण सतह क्षेत्र एकै समयमा बढ्छ। बाँयाको तस्बिरले कण आकार र सतह क्षेत्र बीचको गोलाकार कणहरूको स्थितिमा सम्बन्ध राख्छ (ठूलो दृश्यको लागि क्लिक गर्नुहोस्!)। तसर्थ, पायस स्थिर पार्न आवश्यक सर्फ्याक्ट्यान्टको मात्रा कुल कण सतह क्षेत्रको साथ लगभग रेखागत बढ्छ। सर्फेक्टन्टको प्रकार र मात्रा ड्रपलेट आकारलाई प्रभाव पार्दछ। To० देखि २००nm को थोपाहरु anionic वा cationic surfactants को प्रयोग गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कोटिंग्स मा कोटिंग्स
कार्बनिक र अकार्बनिक pigments कोटिंग योगों को एक महत्वपूर्ण घटक हो। अधिकतम गर्नको लागि वर्णक प्रदर्शन कणको आकारमा राम्रो नियन्त्रण आवश्यक छ। जलबेर्नेस, विलायकजेनेज वा एपॉक्सि प्रणालीमा वर्णक पाउडर जोड्दा, व्यक्तिगत वर्णकण कणहरू बनाउँदछ ठूला गठबन्धनहरू। रोटर-स्ट्याटर मिक्सर वा एन्टिटेटर मनका मिलिहरु जस्तै उच्च-शीट तंत्रहरू पारंपरिक रूपमा यस्ता एग्ग्लोमेरेटहरू तोड्न र व्यक्तिगत वर्णकण कणहरू पीडित गर्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिकेशन एक अत्यन्त प्रभावकारी छ विकल्प कोटिंग को निर्माण मा यो कदम को लागि।
दायाँतिरको तस्वीर (ठूलो दृश्यको लागि क्लिक गर्नुहोस्!) मोतीकरण को प्रभाव मोती लस्टर वर्णक को आकार मा दिखाओ। अल्ट्रासाउन्ड उच्च गति अन्तर-कण टक्करद्वारा व्यक्तिगत वर्णकण कणहरू ग्राउन्ड गर्दछ। को प्रमुख लाभ
उच्च गति मिक्सरहरूमा अल्ट्रासोनिक प्रशोधन, मिडिया मिलहरू सबै कणहरूको अधिक स्थिर प्रक्रिया हो। यसले समस्यालाई कम गर्दछ “टेलि”। जस्तो कि यो तस्वीरमा देख्न सकिन्छ, वितरण वक्रहरू लगभग बायाँ सारियो। सामान्यतया, अल्ट्रासोनिकेसनले अत्यन्त उत्पादन गर्दछ संकीर्ण कण आकार वितरण (वर्णक मिलिंग घटता)। यसले वर्णक वितरणको समग्र गुण सुधार गर्छ, किनकि ठूला कणहरूले सामान्यतया प्रसंस्करण क्षमता, चमक, प्रतिरोध र अप्टिकल उपस्थितिको साथ हस्तक्षेप गर्दछ।
कणको रूपमा मिलिंग र पीस आधार मा आधारित छ अंतर-कण टक्कर यसको परिणामको रूपमा अल्ट्रासोनिक cavitation, अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू उचित रूपमा सम्हाल्न सक्छन् उच्च ठोस सांद्रता (जस्तै मास्टर बैच) र अझै पनि राम्रो आकार को कमी को प्रभाव उत्पन्न। तल तालिकाले TiO को गीली-मिलिङ्गको तस्वीरहरू देखाउँदछ2 (ठूला दृश्यको लागि तस्बिरहरूमा क्लिक गर्नुहोस्!)।
TiO2 बल मिल देखि
स्पि सुकेको TiO2
दाँयामा तस्बिर (ठूलो दृश्यका लागि क्लिक गर्नुहोस्!) अल्ट्रासोनिकेसन द्वारा डेगुसा एनाटेस टाइटेनियम डाइअक्साइडको डिग्लुमेरेसनको लागि कण आकार वितरण घटता देखाउँदछ। Sonication पछि घुमाउनुको साँघुरो आकार अल्ट्रासोनिक प्रशोधनको विशिष्ट विशेषता हो।
उच्च प्रदर्शन कोटिंग्स मा नैनोसाइज सामाग्री
नानोटेक्नोलोजी एक उदीयमान प्रविधि हो जसले धेरै उद्योगहरूमा प्रवेश गर्छ। Nanomaterials र nanocomposites कोटिंग फार्मुलेशनमा प्रयोग भइरहेको छ, उदाहरणका लागि घर्षण र स्क्रैच प्रतिरोध वा यूभी-स्थिरता बढाउन। कोटिंग्समा अनुप्रयोगको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पारदर्शिता, स्पष्टता र चमकलाई कायम राख्नु हो। तसर्थ, प्रकाशको स्पेक्ट्रममा हस्तक्षेप नगर्न नानो पार्टिकलहरू एकदम सानो हुन्छन्। धेरै अनुप्रयोगहरूको लागि यो १००m भन्दा कम छ।
न्यानोमीटर दायरामा उच्च-प्रदर्शन कम्पोनेन्ट्सको भिजेको पिसाई न्यानोइन्जिनियर्ड कोटिंग्सको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण चरण हुन्छ। कुनै पनि कणहरू जुन देखिने प्रकाशसँग हस्तक्षेप गर्दछ, धुन्ध र पारदर्शितामा हानिको कारण। तसर्थ, धेरै नै साँघुरो वितरण आवश्यक छ। को लागी Ultrasonication एक धेरै प्रभावी साधन हो ठीक मिलिंग को ठोस। अल्ट्रासोनिक cavitation तरल पदार्थले उच्च स्पीड अन्त-कण टकरावहरूको कारण बनाउँछ। पारंपरिक मनका मिलिहरु र कंक्रीट मिलों देखि अलग, कण स्वयं आफैं को एक अर्पण गर्दै छन्, मिलिंग मिडिया मीडिया अनावश्यक।
कम्पनीहरू जस्तै पानडुर (जर्मनी) Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणों को उपयोग को लागि dispersing र nanomaterials को deagglomeration in-mold coatings को लागि। यस बारेमा थप पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
खतरनाक वातावरणमा एफएम र एटीएक्स-प्रमाणित डिभिज जस्ता ज्वालामुखी तरल पदार्थ वा सल्टेन्टको लागि UIP1000-Exd उपलब्ध छ।
यस अनुप्रयोगमा थप जानकारी अनुरोध गर्नुहोस्!
Behrend, ओ।, Schubert, एच। (2001): निरन्तर अल्ट्रासाउन्ड इमुलेशनमा हाइड्रोस्टेस्ट दबाब र ग्याँस सामग्री को प्रभाव, मा: अल्ट्रासोनिक्स सोनिककोमिक्स 8 (2001) 271-276।
लैंडफेस्टर, के। (2001): Miniemulsions मा नैनोकणों को उत्पादन; यिनी: उन्नत सामाग्री 2001, 13, कुनै 10, मई 17। विली-VCH।
हेलसिच, टी। (2005): नैनो-आकार विकृति र इन्धनको अल्ट्रासोनिक उत्पादन, मा: युरोपियन नैनोसिस्टम सम्मेलन सम्मेलन ENS’05।